Crittercism: Fanaraha-maso ny fampisehoana fampiharana amin'ny finday | Martech Zone
Alatsinainy, May 5, 2014 Douglas Karr
Crittercism dia fitantanana fahombiazan'ny fampiharana finday sehatra ampiasaina hanaraha-maso, hanaovana laharam-pahamehana, hamahana ary hampivoatra ny zava-bitan'ny fampiharana findainao. Crittercism dia manolotra fomba fijery manerantany momba ny diagnostika fampiharana sy ny hadisoan'ny fampiharana manerana ny fampiharana iOS, Android, Windows Phone 8, Hybrid ary HTML5 manara-maso mpampiasa mavitrika 1 miliara isam-bolana.
Ny crittercism dia manara-maso tranga fampiharana 500 tapitrisa mahery, manara-maso maherin'ny 100 miliara ny isan'ny fampiharana, izay adika amin'ny hetsika 30,000 isan-tsegondra sy mpanjifa mavitrika an'arivony maro. Anisan'izany ny:
OS sy Multiple Support - iOS, Android, HTML5, Windows Phone, na fampiharana Hybrid
Big Data - Fifanakalozana telo miliara isan'andro dia voavaha amin'ny fomba fijery tena misy sy azo ampiharina.
Fampandrenesana Dashboard sy tatitra - Araho maso ny fampiharana famokarana amin'ny fotoana tena izy. Aza hadino ny manatsara ny fampiharana anao rehefa mandeha ny fotoana.
Security RBAC, Data Security - Milamina ny angona ary voafitaka soa aman-tsara ny mombamomba ny mpampiasa farany.
Fanaraha-maso ny fisian'ny & fahombiazana - manara-maso ary manome SLA ho an'ny fampisehoana sehatra.
Namboarina ho an'ny mizana - manomboka amin'ny magazay fampandrosoana tsy miankina ka hatrany amin'ny orinasa lehibe iraisam-pirenena.
Tags: Androidapmfanaraha-maso ny fisian'ny fampiharanafanaraha-maso ny fampiharanafampiharana ny fampiharanafanaraha-maso ny fampisehoana appcrittercismData SecurityFampiharana HTML5HybridiOSfinday fampiharanafitantanana fahombiazan'ny fampiharana findaySecurity RBACWindows Phone 8
Dingana 7 mankany amin'ny fahombiazan'ny marketing amin'ny atiny